March 31, 2018 By Buzz Myanmar News in တွေ့ ဆုံမေးမြန်း Tags: Celebrity, နိုင်ငံတော်, လုံခြုံရေး
လက်ရှိအချိန်တွင် ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များဖြစ်သော သရုပ်ဆောင်မင်းသားနေမင်း၊ Model ဇွန်သံစဉ်နှင့် ဒါရိုက်တာကိုပေါက်တို့၏ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်များကို သိမ်းယူထားပြီး နောက်ထပ် Celebrity အချို့၏အကောင့်များကို ဆက်လက်သိမ်းယူသွားမည်ဆိုသော Nine Myanmar Celebrity (9MC) Hacker အဖွဲ့အား News Watch မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
မင်းသား၊ မင်းသမီး Group Chat မှာပါတဲ့ အကောင့်ဘယ်နှခုကို သိမ်းထားလဲခင်ဗျ။ နောက်ထပ်ရောသိမ်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။
သုံးအကောင့်လောက်တော့ရှိပါပြီ။ နောက်ထပ် အစီအစဉ်ကတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
Ko Aung Min Naing, Ko Nay Min, Zun Than Sin,
သရုပ်ဆောင် နေမင်းကိုလည်း မီဒီယာတခု တောင်းပန်ဖို့ ပြောထားတယ်နော်။ သူ့အနေနဲ့ မတောင်းပန်ဘူး ဆိုရင်ရော။
မတောင်းပန်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နေမင်းကိုယ်တိုင်လည်း Page မှာ လာရောက်ဆက်သွယ်ပြီး ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်နေမင်းကတော့ တောင်းပန်မယ်လို့ပြောလာပြီဆိုတော့ အခြားသူတွေကရော တောင်းပန်ဖို့ ပြောလာပြီလား။ တောင်းပန်ခဲ့ရင်ရော အကောင့်ကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြန်ပေးမှာလဲဗျ။
တခြားသူတွေအနေနဲ့တော့ မလာသေးပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ဆဲကာလပါဗျ။ နေမင်းက မတ်လ ၂၈ ရက်ကတည်းက လာရောက်တောင်းပန်ထားတာပါ ခင်ဗျ။
အချို့မှားယွင်းထိန်းသိမ်းမိတဲ့ Celebrity ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်တွေကိုရော ဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးမလဲခင်ဗျ။
သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကို မကြာခင် အကုန်ပြန်ပေးသွားမှာပါ။
အဲဒီလို မှားယွင်းထိန်းသိမ်းမိတဲ့အကောင့် ဘယ်နှခုရှိလဲခင်ဗျ။ ဘယ်အချိန် ပြန်ပေးမလဲ။
လောလောဆယ်တော့ လမင်းကဗျာ အကောင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်အချိန် ပြန်ပေးမလဲဆိုတာက အချိန်တခုပြန်ရောက်တာနဲ့ ပြန်ပေးသွားမှာပါ။ လမင်းကဗျာအကောင့်ကို မှားထိန်းထားမိတဲ့အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူ့အကောင့်ကို မကြာခင် ပြန်ပေးအပ်သွားမှာပါ။
9MC အနေနဲ့ Celebrity တွေအပေါ်မှာ သဘောထားရပ်တည်ချက်က ဘယ်လိုရှိလဲ။ Celebrity Account တွေကိုပဲ ဖောက်တာလား။ အခြား ဥပမာ- လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့ အကောင့်တွေကိုရော သိမ်းယူပစ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။
ကျွန်တော်တို့ 9MC အဖွဲ့ဟာ သီးခြားရပ်တည်မယ့်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ အခြားဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ ပတ်သက်မှု၊ ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ 9MC က Celebrity တွေကိုပဲ ထိန်းပေးသွားမှာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို Celebrity တွေကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျ၊ အဓိကပစ်မှတ်ကတော့ Group Cele တွေကို ပစ်မှတ်ထားသွားမှာပါ ခင်ဗျ။
9MC က ဘယ်နိုင်ငံအခြေစိုက်ပြီး အဖွဲ့ဝင် ဘယ်နှဦးပါဝင်သလဲ၊ ပြီးတော့ 9MC က လူငယ်တွေလား၊ လူကြီးတွေလား၊ ဖြေလို့ရရင် ဖြေပေးပါ။
နိုင်ငံအခြေစိုက်ကတော့ လျှို့ဝှက်မို့လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ 9MC က လူငယ်ပိုင်းကပါ။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာမှ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိသော လူငယ်တွေနဲ့သာ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဘယ်နှဦး ပါပါသလဲခင်ဗျ။
9MC ကို ဘယ်အချိန်လောက်ကစပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလဲ။ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ Group Chat မှာပါတဲ့ သူတွေအားလုံးရဲ့အကောင့်တွေကို ထိန်းသိမ်းသွားမှာလား။
ဖွဲ့စည်းထားတာတော့ ကြာပါပြီ။ Public ချပြပြီးရောက်လာတာတော့ မကြာသေးပါဘူး။ အားလုံး မဟုတ်တောင် အချို့အကောင့်တွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဦးမှာပါ။
မြန်မာပြည်က Celebrity တွေကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်လဲ၊ 9MC အနေနဲ့ သူတို့အပေါ် သဘောထားလေး သိပါရစေ။
ဟုတ်ကဲ့။ အားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အဆင်ပြေနေရင် ကောင်းပါတယ်ဗျ။ 9MC အနေနဲ့ Celebrity တွေ အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။
အချို့သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ အဖော်အချွတ်ကိစ္စတွေကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲဗျ။
ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါတွေကသူတို့ Privacy တွေပါ။ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး (9MC က သိမ်းလိုက်တဲ့) အကောင့်တွေမှာပါခဲ့ရင်တောင် အပြင်ကို ဖွင့်ဟချပြသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
9MC က အခုလို ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်တွေကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ထိတ်လန့်ကြတယ်။ မလုံမခြုံဖြစ်နေကြတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖေ့စ်ဘုတ်လုံခြုံရေး အခြားဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး အကြံဥာဏ်လေးပေးပါဦး။
No System is Safe. အလုံးစုံ လုံခြုံတယ်ဆိုတဲ့စနစ် မရှိပါဘူး။ Social Network တခုဖြစ်တဲ့အတွက် ချို့ယွင်းချက်ဆိုတာ ရှိနေမှာပါ။
ပေါကားလို့ပြောတဲ့သူတွေကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆို တဲ့ မင်းသမီးရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုရော ဖောက်ဦးမှာလား။
ဟိုတခေါက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့၊ တူရကီ တို့နဲ့ဖြစ်တဲ့ ဟက်ကာ တိုက်ပွဲတွေမှာ 9MC က ပါဝင်ပတ် သက်ခဲ့တာရှိလား။
အကယ်၍ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အတွက် 9MC ကို အကူအညီတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကော။
ဟုတ်ကဲ့ အကူအညီတောင်းခဲ့ရင်တော့ ကူညီပေးအပ်သွားမှာပါ။
ဇဏ်ခီမောင်နှံနဲ့ 9MC ဆက်နွှယ် မှုရှိလား။
ဆက်နွှယ်မှုမရှိပါဘူး၊ အပြင် မှာလည်း မမြင်ဖူးဘူး။ ခုလိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလည်း ကိုယ်လုပ်နိုင်မယ့်အရာ ချပြနိုင်မယ့်အရာဖြစ်လို့ ချပြခဲ့တာပါ။
Credit: ကျော်ဝဏ္ဏ (News Watch)
‘မတောငျးပနျဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နမေငျးကိုယျတိုငျလညျး Page မှာ လာရောကျဆကျသှယျပွီး ဝနျခံခဲ့ပါတယျ’
အနုပညာရှငျအခြို့၏ ဖစျေ့ဘုတျအကောငျ့မြားကို ဖောကျထှငျးသိမျးပိုကျယူလိုကျသညျ့
9MC Hacker အဖှဲ့နှငျ့ အငျတာဗြူး
လကျရှိအခြိနျတှငျ ရုပျရှငျအနုပညာရှငျမြားဖွဈသော သရုပျဆောငျမငျးသားနမေငျး၊ Model ဇှနျသံစဉျနှငျ့ ဒါရိုကျတာကိုပေါကျတို့၏ ဖစျေ့ဘုတျအကောငျ့မြားကို သိမျးယူထားပွီး နောကျထပျ Celebrity အခြို့၏အကောငျ့မြားကို ဆကျလကျသိမျးယူသှားမညျဆိုသော Nine Myanmar Celebrity (9MC) Hacker အဖှဲ့အား News Watch မှ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားသညျ။
မငျးသား၊ မငျးသမီး Group Chat မှာပါတဲ့ အကောငျ့ဘယျနှခုကို သိမျးထားလဲခငျဗြ။ နောကျထပျရောသိမျးဖို့ အစီအစဉျရှိလား။
သုံးအကောငျ့လောကျတော့ရှိပါပွီ။ နောကျထပျ အစီအစဉျကတော့ စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ။
သရုပျဆောငျ နမေငျးကိုလညျး မီဒီယာတခု တောငျးပနျဖို့ ပွောထားတယျနျော။ သူ့အနနေဲ့ မတောငျးပနျဘူး ဆိုရငျရော။
မတောငျးပနျဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နမေငျးကိုယျတိုငျလညျး Page မှာ လာရောကျဆကျသှယျပွီး ဝနျခံခဲ့ပါတယျ။
သရုပျဆောငျနမေငျးကတော့ တောငျးပနျမယျလို့ပွောလာပွီဆိုတော့ အခွားသူတှကေရော တောငျးပနျဖို့ ပွောလာပွီလား။ တောငျးပနျခဲ့ရငျရော အကောငျ့ကို ဘယျလိုပုံစံနဲ့ ပွနျပေးမှာလဲဗြ။
တခွားသူတှအေနနေဲ့တော့ မလာသေးပါဘူး။ ဟုတျကဲ့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ဆုံးဖွတျဆဲကာလပါဗြ။ နမေငျးက မတျလ ၂၈ ရကျကတညျးက လာရောကျတောငျးပနျထားတာပါ ခငျဗြ။
အခြို့မှားယှငျးထိနျးသိမျးမိတဲ့ Celebrity ဖစျေ့ဘုတျအကောငျ့တှကေိုရော ဘယျလိုပွနျလုပျပေးမလဲခငျဗြ။
သူတို့ရဲ့အကောငျ့တှကေို မကွာခငျ အကုနျပွနျပေးသှားမှာပါ။
အဲဒီလို မှားယှငျးထိနျးသိမျးမိတဲ့အကောငျ့ ဘယျနှခုရှိလဲခငျဗြ။ ဘယျအခြိနျ ပွနျပေးမလဲ။
လောလောဆယျတော့ လမငျးကဗြာ အကောငျ့ပဲရှိပါသေးတယျ။ ဘယျအခြိနျ ပွနျပေးမလဲဆိုတာက အခြိနျတခုပွနျရောကျတာနဲ့ ပွနျပေးသှားမှာပါ။ လမငျးကဗြာအကောငျ့ကို မှားထိနျးထားမိတဲ့အတှကျလညျး စိတျမကောငျးပါဘူး။ သူ့အကောငျ့ကို မကွာခငျ ပွနျပေးအပျသှားမှာပါ။
9MC အနနေဲ့ Celebrity တှအေပျေါမှာ သဘောထားရပျတညျခကျြက ဘယျလိုရှိလဲ။ Celebrity Account တှကေိုပဲ ဖောကျတာလား။ အခွား ဥပမာ- လူမြိုးရေး၊ ဘာသာရေးသှေးထိုးလှုံ့ဆျောတဲ့ အကောငျ့တှကေိုရော သိမျးယူပဈဖို့ အစီအစဉျရှိလား။
ကြှနျတျောတို့ 9MC အဖှဲ့ဟာ သီးခွားရပျတညျမယျ့အဖှဲ့ဖွဈတယျ။ အခွားဘယျအဖှဲ့အစညျးနဲ့မှ ပတျသကျမှု၊ ပတျသကျခွငျးမရှိပါဘူး။ 9MC က Celebrity တှကေိုပဲ ထိနျးပေးသှားမှာပါ။
ဟုတျကဲ့ ဒါဆို Celebrity တှကေိုပဲ ပဈမှတျထားတဲ့သဘောပေါ့နျော။
ဟုတျပါတယျဗြ၊ အဓိကပဈမှတျကတော့ Group Cele တှကေို ပဈမှတျထားသှားမှာပါ ခငျဗြ။
9MC က ဘယျနိုငျငံအခွစေိုကျပွီး အဖှဲ့ဝငျ ဘယျနှဦးပါဝငျသလဲ၊ ပွီးတော့ 9MC က လူငယျတှလေား၊ လူကွီးတှလေား၊ ဖွလေို့ရရငျ ဖွပေေးပါ။
နိုငျငံအခွစေိုကျကတော့ လြှို့ဝှကျမို့လို့ ပွောလို့မရပါဘူး။ 9MC က လူငယျပိုငျးကပါ။ ဘယျအဖှဲ့အစညျးမှာမှ ပါဝငျပတျသကျခဲ့ခွငျးမရှိသော လူငယျတှနေဲ့သာ ဖှဲ့စညျးထားတာပါ။
ဟုတျကဲ့ အဖှဲ့ဝငျဘယျနှဦး ပါပါသလဲခငျဗြ။
9MC ကို ဘယျအခြိနျလောကျကစပွီး ဖှဲ့စညျးခဲ့တာလဲ။ မငျးသား၊ မငျးသမီးတှေ Group Chat မှာပါတဲ့ သူတှအေားလုံးရဲ့အကောငျ့တှကေို ထိနျးသိမျးသှားမှာလား။
ဖှဲ့စညျးထားတာတော့ ကွာပါပွီ။ Public ခပြွပွီးရောကျလာတာတော့ မကွာသေးပါဘူး။ အားလုံး မဟုတျတောငျ အခြို့အကောငျ့တှကေို ဆကျလကျထိနျးသိမျးဦးမှာပါ။
မွနျမာပွညျက Celebrity တှကေို ဘယျလို ပုံစံမြိုးဖွဈစခေငျြလဲ၊ 9MC အနနေဲ့ သူတို့အပျေါ သဘောထားလေး သိပါရစေ။
ဟုတျကဲ့။ အားလုံးခဈြခဈြခငျခငျနဲ့ အဆငျပွနေရေငျ ကောငျးပါတယျဗြ။ 9MC အနနေဲ့ Celebrity တှေ အားလုံးကိုခဈြပါတယျ။
အခြို့သရုပျဆောငျတှရေဲ့ အဖျောအခြှတျကိစ်စတှကေိုရော ဘယျလိုမွငျလဲဗြ။
ဟုတျကဲ့။ အဲဒါတှကေသူတို့ Privacy တှပေါ။ အဲဒါတှနေဲ့ပတျသကျပွီး (9MC က သိမျးလိုကျတဲ့) အကောငျ့တှမှောပါခဲ့ရငျတောငျ အပွငျကို ဖှငျ့ဟခပြွသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။
9MC က အခုလို ဖစျေ့ဘုတျအကောငျ့တှကေို ထိနျးသိမျးတဲ့အခါမှာ ဖစျေ့ဘုတျသုံးစှဲသူတှအေနနေဲ့ ထိတျလနျ့ကွတယျ။ မလုံမခွုံဖွဈနကွေတယျ။ အဲဒီအတှကျ ဖစျေ့ဘုတျလုံခွုံရေး အခွားဆိုကျဘာ လုံခွုံရေး အကွံဉာဏျလေးပေးပါဦး။
No System is Safe. အလုံးစုံ လုံခွုံတယျဆိုတဲ့စနဈ မရှိပါဘူး။ Social Network တခုဖွဈတဲ့အတှကျ ခြို့ယှငျးခကျြဆိုတာ ရှိနမှောပါ။
ပေါကားလို့ပွောတဲ့သူတှကေို ဂရုမစိုကျဘူးဆို တဲ့ မငျးသမီးရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျကိုရော ဖောကျဦးမှာလား။
ဟိုတခေါကျက ဘင်ျဂလားဒရှေျ့တို့၊ တူရကီတို့နဲ့ဖွဈတဲ့ ဟကျကာတိုကျပှဲတှမှော 9MC က ပါဝငျပတျ သကျခဲ့တာရှိလား။
အကယျ၍နိုငျငံတျောလုံခွုံရေးအတှကျ 9MC ကို အကူအညီတောငျးခဲ့မယျဆိုရငျကော။
ဟုတျကဲ့ အကူအညီတောငျးခဲ့ရငျတော့ ကူညီပေးအပျသှားမှာပါ။
ဇဏျခီမောငျနှံနဲ့ 9MC ဆကျနှယျမှုရှိလား။
ဆကျနှယျမှုမရှိပါဘူး၊ အပွငျမှာလညျး မမွငျဖူးဘူး။ ခုလိုလုပျဖွဈခဲ့ကွတာလညျး ကိုယျလုပျနိုငျမယျ့အရာ ခပြွနိုငျမယျ့အရာဖွဈလို့ ခပြွခဲ့တာပါ။
Credit: ကြျောဝဏ်ဏ (News Watch)